Mwedzi: May 2020
Iyo yekutanga injini fekitori munyika yedu yakavambwa neTK kuGazi Orman Çiftliği. Mabasa efekitori yakagara kusvika 1951 uye nekuda kwemamiriro enguva, akaendeswa kuMachina neChemical Viwanda mugore rimwe chete. Iyi fekitori [More ...]
Nhasi muNhoroondo 31 mai 1934 zuva uye 2487 yakatengwa kubva kuFrance ne İzmir-Kasaba uye Temdidi Railways (703 km). 5 kufarira uye 50 gore rekudzikunura 1934 Türk [More ...]
IMM Traffic Yazvino Istanbul Road uye Trafiki Mamiriro ezvinhu RAYHABER Inopa nzira dzakareruka uye mamiriro emigwagwa yaunogona kuenda nemepu yepamigwagwa. Mamiriro ezvinhu emigwagwa yeIstanbul pakati uye mamwe matunhu, [More ...]
YeIstanbul Road uye Trafiki Mamiriro ezvinhu RAYHABER Inopa nzira dzakareruka uye mamiriro emigwagwa yaunogona kuenda nemepu yepamigwagwa. Mamiriro ezvinhu emigwagwa yeIstanbul pakati uye mamwe matunhu, traffic yakakura [More ...]
Izmir Karşıyaka YeMigwagwa uye Migwagwa YeTraffic RAYHABER Inopa nzira dzakareruka uye mamiriro emigwagwa yaunogona kuenda nemepu yepamigwagwa. Mamiriro ezvinhu emugwagwa weIzmir pakati uye mamwe matunhu, anorema traffic [More ...]
Kune İzmir mugwagwa uye Trafiki Mamiriro ezvinhu RAYHABER Inopa nzira dzakareruka uye mamiriro emigwagwa yaunogona kuenda nemepu yepamigwagwa. Mamiriro ezvinhu emumugwagwa weIzmir pakati uye mamwe matunhu, uko traffic iri yakakura [More ...]
Prof. muna Yeşilköy Dr. 73H mutsetse unovhurwa wekufambisa kuenda kuMurat Dilmener Emergency Hospital. Prof kuvhurwa muAtatürk Airport. Dr. Kuti usvike kuMurat Dilmener Emergency Hospital, IETT inyowani [More ...]
Mutevedzeri weAKP Adıyaman Ahmet Aydın akataura kuti basa rose rakakosha rakaitwa kuitira kuti njanji ipfuure mudunhu reGölbaşı uye kuti Gölbaşı-Adıyaman-Kahta High Speed ​​Chitima, icho chiri kuvakwa. [More ...]
Kubuda kwehutachiona hweCorona kwakonzera maronda makuru pasi rese nepanyika yedu. Denda repasi rose nekuda kwekutora matanho, Turkey iri pakati penyika dzakasangana dzakagadzikana. Zvishoma nezvishoma, mushure mekupinda yakajairwa maitiro [More ...]
Bilal Ekşi, maneja maneja weTHY, ndege dzakamiswa nekuda kwematanho ekoroni uye ichatangazve kushanda munaChikumi, akataura kuti hapana danho rakatorwa kuti zvigaro zvigare zvisina chinhu mundege. Nekuda kweiyo Covid-19 denda [More ...]
Gurukota raKaraismailoğlu vakati, "Tiri kutanga nendege kunhandare dzendege avo vakawana zvitupa nekugadzirira Kovid-19." Nhandare 6 vatambira zvitupa zvavo kusvika pari zvino. Mushure mezororo remwedzi miviri, nguva yedu yekutanga yaive na2:1 musi wa 10.00 June. [More ...]
Tekirdag Metropolitan Municipality Meya Kadir Albayrak vakatora chikamu muchirongwa chakarongeka nekuda kwekudyara mari yekutengesa zvinhu izvo zvichabvumidza kutakurwa kwezvinhu zvinotakura kubva kuAnatolia kutakurwa kuenda kunzvimbo dzese dzepasi kuburikidza neTekirdag Asyaport Port. mhemberero [More ...]
Kubva zvakatanga chirwere chekoronavirus, Kocaeli Metropolitan Municipality, iri kupa rubatsiro kune vagari vanogara muKocaeli munzvimbo dzese, inowedzera nguva yekufambisa yakasununguka yavanopa kuvashandi vehutano neyemishonga. Metropolitan Municipality [More ...]
Sezvazvinozivikanwa, ALTAY Main Battle Tank huwandu hwekugadzira chibvumirano chakasainwa pakati peDziviriro Viwanda Directorate (SSB) neBMC Zvimoto munaNovember 9, 2018 Mukati meyero yechibvumirano chakasainwa, BMC iri padanho rekutanga, makumi mana [More ...]
Iyo pakati ichavakwa mukati mechikamu cheiyo High School Transition System (LGS) ichaitwa 20 Chikumi 2020. Ministry of Education (MEB) yakavandudza LGS rezita rezita. Gurukota reNational Education Ziya Selçuk, neshanduko dzakaitwa mugwaro uye bvunzo [More ...]
Gurukota rezvekurima uye Masango Bekir Pakdemirli, 19 yenyika mapaki uye 44 ma park park akavharwa kune vashanyi nekuda kweiyo mhando nyowani yekorona virus (Kovid-249) ichatanga kushumazve zvakare sekutanga kwaJune 1, 2020. [More ...]
Yechipiri yeVirtual General Trade Delegation chirongwa chakarongwa neBazi rezvekutengeserana inoitirwa Kenya, imwe yehupfumi hukuru muEast Africa. Vanhu veKenya vanogona kuwana zvigadzirwa zveTurkey muzvikamu zvakasiyana kubva pane zvekudya kusvika kune zvekuchengeta wega, kubva mukuchenesa kusvika kuzvinhu zvevana. [More ...]
Ministry of Family, Labor and Social Services yakazivisa matanho ari kutorwa muzvivakwa zvechechi, makirabhu evana uye nzvimbo dzekuriritira, izvo zvakapihwa mvumo yekuvhura uye zvichatanga kushanda musi wa1 Chikumi. Kugadziriswa kweMutungamiriri Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate ichaenderera nehuremu hwemagariro mukati meiyo chiyero che "Zhizha Remwaka Traic Precautions" ichaitwa pakati pa 1 June na 1 Gumiguru. Iko kushandiswa kwemaski kuchave kwakamanikidzwa uye kure munharaunda [More ...]
Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate ichaenderera nehuremu hwemagariro mukati meiyo chiyero che "Zhizha Remwaka Traic Precautions" ichaitwa pakati pa 1 June na 1 Gumiguru. Ndichiri kugadzirisa nguva dzekutiza mu Rail Systems, kushandiswa kwemaski [More ...]
Rail Systems Machini Technology Dhipatimendi (2 Makore) 2019-2020 Base Scores uye Kubudirira Nzvimbo; 2-Year Rail Systems Machine Technology Base Scores 2020 uye Rail Systems Machine Technology Kubudirira Nzvimbo 2020 [More ...]
Pasati pasara mwedzi unosvika iyo Yakakwira Dzidzo Institutions Exam (YKS) ichaitwa 27-28 June. Halis Aygün, Musoro weMayero, Kusarudzwa uye Kuiswa Center (ÖSYM), akataura zvirevo zvine chekuita nezvebvunzo. Hürriyet munyori Nuray [More ...]
Mutsamba yemukati muTCDD, makanga mune kureururwa muOrlu, makore maviri apfuura, mune vanhu makumi maviri nevaviri vakafa uye tsaona dzechitima uye kunyange kukokwa kunjodzi nyowani. Mune mutsara mumubvunzo, bhiriji pane iyo uye [More ...]
Geyve Doğançay Yakakwira Yekukurumidza Chitima Maki Kuvaka; Dent yakaitika mukuvakwa kwechitima chekumhanya kwazvo pakati peGeve Doğançay neSapanca. Kunyange chiitiko ichi chikakonzera kutya, hapana mukana wakakuvadzwa. [More ...]
High Speed ​​Chitima (YHT) ndege, dzakamira musi wa 28 Kurume mukati mechikamu cheiyo corona hutachiona matanho anobata nyika yese, akaiswa zvakare mushe mushure memwedzi miviri. YHT yadzoka mukushanda musi wa 2 Chivabvu muIzmit kubva 1 Nyamavhuvhu. [More ...]